ဆုတောင်းခြင်းအထဲ၌ ယေရူ ၊ မျက်ရည်၊ အော်ဟစ်ခြင်း နှင့် ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း
သတင်းကောင်းထဲတွင် ယေရူ နံနက်စောစောထကာ ဆုတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အရာ မြောက်မြားစွာ ဥပမာတွေ့ရသည် (မာကု ၁း ၃၅)၊ ညလုံးပေါက်ဆုတောင်းခြင်း (လုကာ ၆း ၁၂) နှင့် ရက်လေးဆယ် အစာရှောင်ခြင်း (မာသာဲာ ၄း၂)။ သူ့တပည့်တော်တွေက ယေရူအတွက် အရေးကြီးသောအရာသည် ဆုတောင်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်းကို သိလာတော့၊ မည်သို့ဆုတောင်းရမည်ကိုသွန်သင်ပေးပါ တောင်းလျှောက် ခဲ့ကြသည် (လုကာ ၁၁း ၁)။
ယေရူ၏ဆုတောင်းခြင်းသည် သာမန်အလုပ်မဟုတ်ပဲ၊ အင်မတန်အရေးပါသောအရာ၊
ဟေဗြဲ ၅း ၇ - ထိုခရစ်တော်သည် လူဇာတိအဖြစ်၌ နေစဉ် ကာလ၊ သေခြင်းမှကယ်လွှတ်နိုင်တော် မူသောသူကို၊ ကြီးစွာသော ကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုတောင်းပဌနာပြုသဖြင့်၊ ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရသည်၊
ဘာကြောင့်မျက်ရည်ကျရတာလဲ? မျက်ရည်ကျခြင်းသည်နာကျင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားပြု ဆုတောင်းသောအခါ၊ ယေရူသည် ဂရုဏာခံစားကာ လူတွေ၏ ဖျားနာခြင်း၊ ဒုက္ခ နှင့် လူတွေ၏သေခြင်းအကြောင်းအားဖြင့် ၀န်လေးခဲ့သည်။ လူတို့၏ဆုံးရှုံးခြင်းကြောင့်သူသည် နာကြင် ခဲ့ရသည်။ လူတွေအတွက် ငိုကြွေးခဲ့ကြသည်။
ဘာကြောင့်အော်ဟစ်သနည်း? အော်ဟစ်ခြင်းသည် ခုခံခြင်းဖြစ်သည်။ ၀ိညာဉ်တိုက်ပွဲတွင် ယေရူသည် အပြစ်နှင့် ဆာတန်၏ တန်းခိုးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ လောက၏ အမှောင်ထုတန်းခိုးကို တိုက်ခိုက် အနိုင်ယူခဲ့သည်။ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် လူတွေကိုယ်စားတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
ဘာကြောင့်ကြောက်ရွံ့ရသနည်း? ဒီကြောက်ရွံ့ခြင်းသည် သာမန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမဟုတ်ပဲ၊ ဘုရားကိုကြောက်ကာရိုသေခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရူသည် ပြည့်စုံကာ အပြစ်၏မလုပ်သော်လည်း၊ လူသားအဖြစ်မှ အပြစ်ပြုနိုင်သည်။ လူသားတစ်ယောက် ကဲ့သို့ပင် လောဘ၊ တပ်မက်ခြင်းနှင့် စုံစမ်းခြင်းကိုခံခဲ့သည်။
ယေရူကဲ့သို့ပင်၊ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ဂရုဏာခံစားခြင်း၊ အမှောင်ထုကို တွန်းလှန်ခြင်း နှင့် ဘုရားကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ရန် ဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်သည်။
လိင်တူလက်ထပ်ခြင်း၊ ဂရိတ်တို့၏ ဒေ၀ါလီခံရခြင်း နှင့် ဂျူးတို့၏ Aliyah
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က US အထက်တရားရုံးမှ လိင်တူ လက်ထပ်ခွင့်ကို အတိုက်အခံအားလုံးကိုများ ကြားက ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ကမ္ဘာ့ ထိပ်တန်းနိုင်ငံသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် သဘာဝတရားကို ဆန့်ကျင်ရန် ဆုံးဖြစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်တော့ ဘယ်ကိုရောက်မလဲ? ဆိုတာကို စဉ်းစားမိ ချိန်တွင် ရောက်လာသောအတွေးမှာ ငါတို့သည် အနောက်တိုင်းတွေရဲ့ ပျက်စီးယိုယွင်းမူများနှင့် အာမေရိက၏ သမာတိကို စောင့်ရှောက်သူများဖြစ်ကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဂရိတ်တွေ၏ ပျက်စီးခြင်းနှင့် အကျင့်သီလ ပြက်ပြားမူသည် တစ်ဖြည်းဖြည်းခြင်း ထိပ်ဆုံးပိုင်းသို့ရောက်လာပါသည်။ ပြီးခဲ့သော အနှစ် ၂၀၀၀ အတွင်း အနောက်တိုင်းသည် Greco-Roman အတွေးအခေါ်၊ နိုင်ငံရေး နှင့် ဥပဒေ နှင့် Judea-Christian ဘာသာရေး၏ သွန်သင်ချက်နှင့် အကျင့်တို့တည်းဟူသော တိုင်နှစ်ခုပေါ်တွင် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဒီနှစ်တွင် တဖြည်းဖြည်းခြင်း လောကီဆန်လာကာ Greco-Roman သည်မူလဖြစ်လာကာ အနောက်တိုင်းနိုင်ငံသည် post-Christian ကမ္ဘာဖြစ်လာသည်။ ဒီအပတ်တွင် Greek ရပ်တုများပေါ်တွင် အနောက်တိုင်းကို- “ဒေ၀ါလီခံခြင်း” ဟုရေးသားခြင်းကို တွေ့ကြရသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်း ကျွန်တော်တို့ အစ္စရေးနိူးထရေးအဖွဲ့မှ သုံးဦးတို့သည် Aliyah-Jewsih တို့၏ အစ္စရေးပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်းသည် ကျမ်းစာ ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေးခေါ်ရေးသားကြသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ဤသို့အရှေ့အနောက်တောင်ပိုင်း အာမေရိက နှင့် ဥရောပမှ ဂျူးလူမျိုးများ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာရန် များစွာသော မူများဖြစ်လာမည့်အကြောင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ဒီအချိန်သည် ထိုအချိန်ပင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
Holocaust အပြီးအခု နှစ်ပေါင်း ခုနှစ်ဆယ်တွင် ဂျူးလူဦးရေသည် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် လူဦးရေလောက် မထမဆုံးရောက်ရှိလာသည်၊ လက်ရှိ အစ္စရေး ၏ လူဦးရေသည် ( ၆ ၅၀၀ ၀၀၀) ဖြစ်ကာ၊ အာမေရိကတွင်ရှိသောဂျူး လူဦးရေ ( ၆ ၁၀၀ ၀၀၀ ) ကိုကျော်ကာ၊ France ၏ ဂျူးလူဦးရေ ( ၄၅၀ ၀၀၀ ) သည် တတိယအများဆုံးနေရာ ရောက်လာသည်။
ဒီသတင်းစကားတွင် Asher မှ အဖ ခမည်းတော်ဘုရားသည် ယေရူအားဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ဖေါ်ပြလျက်ရှိကြောင်းကို သွန်သင်ထားပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လို နားထောင်ရန် ဒီ မှာနှိပ်ပါ!
င်္အဂါနေ့တွင် Greece ပြည်ကိုထွက်သွားသော အစ္စရေး ရေတပ် ကိုမန်ဒို င်္သဘောဖြင့်ရောက် ရှိကြသည်။ Tunisian ၏သမ္မတဟောင်း Munsaf Marzuki နှင့် Arab အစ္စရေး ပါလီမန် Basal Getas တို့ပါဝင်သည်။ အနှောက်အယှက်အရှိပဲ Ashdod ဆိပ်ကမ်းကို ရောက်ရှိကြသည်။ ဒီအရာသည် အစ္စရေးအတွက် ထင်းရှားသော နည်ှးဗျူးဟာဆိုင်ရာ အောင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ပါဝင်သူများကို Netanyahu မှ လိပ်မူ စားရေး ခဲ့ပါသည်။ ထိ်ုစာကို “ အစ္စရေးမှ ကြိုဆိုပါသည် ဆိုသော စကားဖြင့် အစချီပေးခဲ့ပါသည်! သင်တို့သည် ကြာရှည်သော အမှားကိုပြုလုပ်ကာ Syria ကိုဦးတည် သွားရောက်တာဖြစ်နိုင်သည်။ Assad ၏ အုပ်ချူပ်ရေးသည် လူသတ် Iranian တို့၏အကူအညီဖြင့် နေ့တိုင်းချီတက်ကြစဉ်၊ အစ္စရေးမှာ Hamas ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ အပြစ်မရှိသော ကလေးများကို သတ်ဖြတ်ရန်ကြံစည်ခြင်းများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။”
Netanyahu က ဒီနှစ်တွင် ၁.၆ သန်း ကို Gaza သို့ကူညီနိုင်ခဲ့ကြောင်းဖေါ်ပြပါသည်။ Gaza မှ အစ္စရေးသို့ အပိတ်အဆို့မရှိ လူသားရေးစာနာမူ များ လုပ်ဆောင်သွားလာနိုင်ကြောင်းပြောပါသည်။ နိုင်ငံတကာ ဥပဒေနှင့် အညီပင်လယ်မှ လုပ်ဆောင်ကိုတော့ ရပ်ဆိုင်းထားသည်။ လူအခွင့်အရေးက အမှန်စိတ်ဝင်စားပါက Gaza ရှိကလေးများကို သောင်းကျန်းသူများတို့၏ လက်ထဲက ကာကွယ်သင့်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်။
၁၉၇၀ ၏ ရေပန်းအစားဆုံး ဓါတ်ပုံသည် ဗုံနှင့်တိုက်ခိုက်ခံပြီနောက် အ၀တ်အစားမပါပဲ ထွက်ပြေးခဲ့သော Vietnamese အမျိုးသမီး၏ အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။ သူမ၏အမည်သည် Kim Phuc ဖြစ်ပါသည်း။ ဘာတွေထပ်ဖြစ်သည်ကို သိနိုင်ရန် CNN တွင် အောက်ပါ လိပ်စာ၌ ကြည်ပါ။ ဒီမှာ နှိပ်ပါ!
အနှောက်အယှက်၊ ပါလစ်စတိုင်းမှ ဒုက္ခ သည်များကို ငွေကြေးပံ့ပိုးခြင်း
JJJ ခေါ် ( Jerusalem Institute of Justice ) မှ ကျွန်တော်တို့ မိတ်ဆွေများက ပါလစ်စတိုင်းဒုက္ခ သည် များ၏ အခြေနေကို ဗီဒီယို အားဖြင့်တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်လို နားထောင်ရန် ဒီမှာ နှိပ်ပါ!